MAANHADAL: Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya 1960kii illaa maanta (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
MAANHADAL: Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya 1960kii illaa maanta (dhegayso | daawo)
Febraayo 22, 2019 3:50 g 0
Kulanti wacan dhagaystayaal ku soodhawadda barnaamijka Maanhadal oo todobaadkan ku falanqeyn doono siyaasadda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya iyo damaca ballaaran ee Kenya kuna aaddan badda Soomaaliya.
Shalay oo Khamiis ahayd dawladda Kenya ayaa mar labaad ka hadashay xiisaddaas kuna eedeysay Dowladda Federalka Soomaaliya in ay dunida marinhabaabinayso. Kenya ayaa sheegatay in aysan ka tanaasuli doonin taako kamid ah dhul-badeedka lagu muransan yahay ayna macquul tahay in Kenya ay
cunaqabatayn ku soo rogto dalka Soomaaliya.
Maanhadal waxaa maanta marti u ah Danjire Ciid Baddal oo ahaa safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey QM (UN) iyo Prof Xasan Sheekh Cali Nuur.
Ahmed Shiikh Maxamed Tallman ayaa barnaamijka soo jeedinaya. Hoos ka dhegayso.
MAANHADAL 218 Wararka 19786
Wasiirka arrimaha gudaha DFS oo ka hadlay wadahadaladda Dowlada & Somaliland (Daawo)
Sheeko Gaaban: Guuldarro Jacayl God ma loo Galaa! (Taxanaha 28aad – dhegayso | daawo)